Modern izitolo zokuthenga ukudla banezeluleko omkhulu ukudla ezahlukene amanani amabanga. Inkululeko yokuzikhethela akuyona ngokuphelele njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Abaphilileyo is lincipha minyaka yonke. Isizathu salokhu ukudla kwethu. Ukwakheka mikhiqizo ezingasho izithasiselo ehlukahlukene ukudla, kuhlanganise E1442. Kuyini futhi kanjani izidakamizwa kuthinta imizimba yethu, akubona bonke uyazi. Ngayiphi imikhiqizo aqukethe lo okufakiwe ukudla? Ake sizame ukuqonda.
E1442 - kuyini?
E1422 - ukwelekelela eziphathelene nesitashi ukushintshwa. Igama layo chemical - gidroksipropildikrahmalfosfat. Crosslinked hydroxypropyl dikrahmalfosfat - eyaziwa nangokuthi E1442. Kuyini lokhu? I okufakiwe is kabanzi embonini yezokudla njengenhlangano emulsifier noma thickener. Enkabeni yalo isitashi ezivamile, asetshenziswe ekukhiqizeni imikhiqizo ukudla, okuyinto kuye kwashintsha izici kokuqala. E1442 - emihle powder emhlophe ophuzi luhlaza.
E1442 okufakiwe kudalwa elabhorethri usebenzisa ezivamile esterification ukusabela ukudla isitashi. Lokhu kudinga i-sodium trimetaphosphate (noma phosphorus oxychloride) kanye propylene oxide. Ekusabeleni esterification ngamaqembu ahlukene kwesakhiwo yezinhlayiya isitashi sihlanganise ( "ithungwe"). Lokhu kuholela yokuthi isitashi Ushintshe anezakhi ungcono ezivamile. Ngokuvamile kufakwa izithasiselo esetshenziswa womshini isitashi etholwe ngommbila izakhi. Uma ungeza isitashi Ushintshe, ukudla lapho incibilikiswa kanye okokuqandisa qinani ukunambitheka kwabo izakhiwo, abe ukungaguquguquki iyunifomu ngaphezulu nombala. Futhi, okufakiwe ihlalisekile ane-alikhali futhi kwi-esidi.
Zikhona amazinga ukusetshenziswa eyamukelekayo?
Thickener E1442 bavunyelwe ukufaka ukudla ezahlukene ngesikhathi esifanayo akunqunywa inani lansuku zonke ukusetshenziswa kwalo. Kodwa kukhona amazinga izigaba ezahlukene imikhiqizo:
Hhayi ngaphezulu kuka-10 g ngalinye 1 kg izaqathe ekheniwe.
20 - I-usadinsi nemikhiqizo efana nayo.
60 - I-mackerel okusemathinini futhi analogue.
Kufika 10 - ngokuba enongiwe isibilile omuncu ubisi yogurt imikhiqizo lihambisana namanye izithasiselo efanayo.
E1442 - ibhekwa wezokudla, esangenza hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi kwamanye amazwe aseYurophu, eMelika, eNew Zealand nase-Australia. I umkhakha yobisi isetshenziswa womshini amnandi ikhekhe ushizi, ukhilimu, futhi yogurt neqhwa cream, ngoba ivumela ukuba sifinyelele ukungaguquguquki viscous yomkhiqizo wokugcina. Hhayi ngaphandle isitashi kushintshwe okuthile kulo bese ukukhiqizwa okusheshayo ukudla (isobho ahlukahlukene, nososo) futhi ukudla okusemathinini (ikakhulukazi inhlanzi, imifino, izithelo).
Gidroksipropildikrahmalfosfat ubamba amanzi futhi wavala kahle kuwo. Njengoba i-ejenti ukuqina kungase ketshezi zisetshenziswe emsebenzini wokukhiqiza ahlukahlukene izigqulo Izingxube. isitashi Kushintshwe lingasetshenziswa esikhathini uwoyela negesi umkhakha njengoba ingxenye lubricating futhi lwaluyophola uketshezi imishini imishini. E1442 thickener esetshenziswa futhi izigaba yenqubo ukukhiqizwa uginindela iphepha umkhakha. Kungenzeka futhi ukusebenzisa ketshezi yendwangu wemboni ngoba amelana ukucindezeleka mechanical futhi amazinga okushisa aphakeme.
E1442: enobungozi noma cha?
E1442 ubhekwa okufakiwe ephephile futhi ayinangozi. Ingabe kunjalo ngempela? Okokuqala sidinga ukuqonda kwenzeka kanjani ukugaya emzimbeni.
Le nto, kanye evamile kithi ube isitashi, kalula kusetshenzwe umzimba. E1442 ukusabela ngamanzi ipheshana wokugaya ukudla kuba glucose, bese amuncwa wumzimba. Kumiswa ukusabela hydrolysis we isitashi Ushintshe is kanye leyavela - dextrin. Kuyinto polysaccharide, okuyinto yingozi umzimba. ukusetshenziswa engalawuliwe imikhiqizo equkethe lokhu okufakiwe ukudla kubambezela inqubo wokugaya ukudla emathunjini. Lokhu kungadala ukuqumba, isicanucanu, ukuthuthukiswa izifo esiswini.
Noma kunjalo, isenzo kwezithako emzimbeni womuntu namanje uhlala yayingaziwa nhlobo. engayitholi ngokweqile imikhiqizo gidroksipropildikrahmalfosfatom kungase kuvuse ukwanda esithasiselweni. Odokotela belulekwa alidle mikhiqizo kwabesifazane abakhulelwe kanye lactating, kanye nokusetshenziswa kwazo ukondleka kwabantwana zanoma iyiphi iminyaka. Phakathi kwezinye izinto, olwaziwa ososayensi ukuthi isitashi Ushintshe uyakwazi kushiya ukuthuthukiswa izifo pancreatic.
abakhiqizi zokudla zesimanje zithi izithasiselo zokudla akunangozi, kuhlanganise E1442. Kuyini lokhu? Lokhu izidakamizwa kuyinto isitashi zokwenziwa ezinezici ngcono. Eqinisweni, okufakiwe akuyona ayinangozi ngokuphelele, ngoba ikhono kubangele isifo isimiso sokugaya ukudla bungene.
Amakhiwane ukukhwehlela: iresiphi ubisi. imithi Amnandi Futhi ngempumelelo
Uyini ewusizo kunazo zonke izinhlobo uju? Ulwazi mayelana nezinhlobo futhi izicelo zabo
Cardamom - kuyini? Amaqiniso ethakazelisayo izinongo
Imibono Eminingi sauce "Calvet": ingxubevange flavour
Ugqozi Non-zezimali njengendlela ukugcina umsebenzi
Ukuze kusizwe umfundi: Ukuhlaziywa kwe-inkondlo Derzhavin "Ukuhlonishwa"